Isu tiri chikamu chenyika ino - uye tine mutoro pairi
Sekukura nekukurumidza, isu tiri chikamu chenzanga yedu uye nharaunda yedu.Isu tinoshandisa zviwanikwa pasi rese.Uye pasi rose, kubudirira kwedu kunoenderana nevanhu.Ndicho chikonzero nei tichitenda: bhizimusi zvinoreva mutoro - magariro, tsika uye mutoro wezvakatipoteredza.Yedu Corporate Social Responsibility policy matorero atinoita basa iri - kuenda pamusoro uye kupfuura zvatinosungirwa zviri pamutemo.
Jecha RAKAgadzirwa PANZVIMBO YEJECHA RACHOKWADI
Kune marudzi maviri ejecha reinjiniya yemazuva ano, jecha remusikirwo nejecha rakagadzirwa nemuchina.Jecha remusikirwo ijecha nematombo akakwenenzverwa nemasikirwo.Kunyangwe mhando yejecha rechisikigo yakanaka kwazvo, isimba risingadzokerikezve.
Kudzokorora uye kugadzikana kwekupa
Kunyange zvazvo tsime rejecha rechisikigo rakakura, rinongogumira kujecha rechisikigo risati rashandiswa.Jecha rinogadzirwa rinogona kuwanikwa nekupwanya matombo echisikigo asina kushandiswa, marara akashandiswa zvidhinha uye simende zvidhinha, kana akapwanyika matombo miswe, zvakasara, matombo machipisi, matombo slag, migodhi tailings, etc. Zvinogona kutaurwa kuti muchina-yakagadzirwa jecha chinhu recyclable ne kwakasiyana-siyana kwezvinyorwa.
Deredza mari uye uvandudze mashandiro
Jecha rakagadzirwa rinogona kuderedza kusvibiswa uye kugadzirisa mhando yejecha rakapedzwa uye zvigadzirwa zvematombo kuburikidza nekuongorora nekuchenesa.Pamusoro pezvo, jecha rakagadzirwa nemuchina rinowanzova nehukuru husina kurongeka uye nzvimbo yakaoma.Kana simende ichishandiswa kubatanidza nezvimwe zvimiro, jecha rakagadzirwa nemuchina rinowanzova nekunamira kuri nani uye simende inozobuda inowedzera kudzvanywa.
Jecha rakagadzirwa rine zvakawanda zvakasiyana-siyana uye rinogona kushandiswa zvakare.Nokudaro, mutengo wemusika patani ndeye 20-45 rmb yakaderera pane yejecha rechisikigo.Kushandiswa kwejecha rakagadzirwa kune kushanda kuri nani uye kudhura kwakaderera.
Jecha rakagadzirwa panzvimbo yejecha rechisikigo
Mechanical biological treatment zvirimwa zvinoshandisa marara ekanzuru, marara ekutengesa uye marara emumaindasitiri semarara.Mumaitiro echivanhu, marara anoongororwa uye anorongwa, uye zvinhu zvese zvakakosha zvinodzoserwa kana kushandiswa mukugadzira simba.
Parizvino, nzanga yakaisa zvakawanda zvekuedza kwayo pakudzidziswa kwevakaremara kuvandudza kugona kwavo, asi haina kuita nhamburiko dzekuvandudza nzvimbo yebasa uye kupa rubatsiro rwebasa, izvo zviri nyore kuwana zvakapetwa kaviri mugumisiro nehafu yekuedza.
Maonero ekutarisira haasi chiremerera, akanaka pakuwana nekuziva kugona kwavo, kugoneswa ndiko.
CARBON NEUTRALITY & EMISSION PEAK
Shingairira pindura kune girinhi simba kuchengetedza uye kuvhura imwe mota jecha kugadzira muchina, kushandiswa kwesimba kunodonha 36.5%, kupa gumbo-kumusoro kuCarbon kusarerekera &Emission peak.
Tichitarisa nharaunda yeguruva munzvimbo yekuvaka yeindastiri uye kupararira kwazvino kwecovid-19, isu tinopa inopindura mask yekudzivirira kune vatengi vekupedzisira pazvinodiwa.